သူ႔အပေၚ ႏိုင္ငံေရးနဲ႕ပုဂိၢဳလ္ေရး ေရာေထြးေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ေနတဲ့သူေတြကို ျပန္လည္ေခ်ပတုန္႔ျပန္လိုက္တဲ့ ဒီဇိုင္နာ မ်ိဳးမင္းစိုး – Cele Snap
သူ႔အပေၚ ႏိုင္ငံေရးနဲ႕ပုဂိၢဳလ္ေရး ေရာေထြးေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ေနတဲ့သူေတြကို ျပန္လည္ေခ်ပတုန္႔ျပန္လိုက္တဲ့ ဒီဇိုင္နာ မ်ိဳးမင္းစိုး
ပရိသတ်ကြီးရေ…..ဒီဇိုင်နာလောကမှာ နာမည်တစ်လုံးနဲ့ရပ်တည်အောင်မြင်နေပြီး နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်တွေအားကိုးအားထားရတဲ့ ဒီဇိုင်နာမျိုးမင်းစိုးကိုသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ သူက နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြုလုပ်ကျင်းပပေးခဲ့တဲ့ Mask ချုပ်ပြိုင်ပွဲမှာလည်း ဆုရရှိခဲ့တဲ့ဒီဇိုင်နာကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မျိုးမင်းစိုးက ဖေဖော်ဝါရီလအစပိုင်းတည်းကတိုင် အရေးတော်ပုံကြီးအောင်မြင်ရေးမှာ ပြည်သူပရိသတ်တွေနဲ့အတူ တစ်သားတည်းရပ်တည်ခဲ့တဲ့သူပါ။အခု လိုယုံကြည်ရာကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရပ်တည်နေပေမယ့် နိုင်ငံရေးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရောထွေးကာ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်လာတဲ့သူတစ်ချို့ကြောင့် မျိုးမင်းစိုးကသူ့ရဲ့ Facebookစာမျက်နှာမှာ ရေးသားလာခဲ့ပါ တယ်။
“အခုလိုနိင်ငံရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတာကိုအခွင့်အရေးယူပြီးကျန်တော့်ရဲ့personal အကြောင်းကိုသေချာမစုံစမ်းမလေ့လာမသိပါပဲ….နိင်ငံရေးကိုအခွင့်အရေးယူပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာတိုက်ခိုက်မှူမျိုးစုံနဲ့နာမည်ပျက်အောင်လုပ်ကြံ့ပြီး…အကောင့်အတုမျိုးစုံကနေSpeak out ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဆိုပီးချောက်တွန်းပုတ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပီးလူတွေအမုန်းပွါးစေအောင်နိင်ငံရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရောထွေးလုပ်ကြံပြီးထင်ရာမြင်ရာပြောချင်ရာပြောနေတာတွေတွေ့နေရလို့ပါ…..ရေးနေတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကကြဘာမှမလုပ်ကြပါပဲနဲ့..လေနဲ့ပဲသူများရဲ့ဘဝတွေကိုချောက်တွန်းပီးခုတ်ရာတစ်ခြားရှရာတခြားပြောချင်ရာဇွတ်ပြောပြီးဘေးထိုင်ဘုပြောပြီးကျန်တော့်ကိုအဖမ်းခံစေချင်တဲ့ဒလန်အချို့ကသပ်သပ်ရှိနေတယ်……သတင်းလွှင့်တဲ့သူကဘယ်သူဘယ်ဝါဘာ အလုပ်လုပ်တယ်ဘယ်မှာနေတာလည်းဆိုတာလည်းသိပါတယ်..ဒါပေမဲ့ပြောချင်ရာပြောဆိုခွင့်ဆဲဆိုခွင့်ရနေတဲ့အချိန်မီု့ကျန်တော်မျက်ကွယ်ပြုကာသူတို့ကိုအပစ်မမြင်ပဲကြိုးစားပီးနေခဲ့ပ ါတယ်….
ကျန်တော့်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုသေချာပြန်ကြည့်ရင်သိနိင်ပါတယ်…ကျန်တော်ကိုသက်သက်ကြီးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့နဲ့တိုက်ခ်ုက်ရအောင်…ကျန်တော့်ကလည်းသူဠေးတစ်ယောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး..ကျန်တော့်အမေသင်ပေးတဲ့စက်ချုပ်ပညာနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုပြီးလှူတန်းသင်တန်းပြနေတဲ့စက်ချုပ်သမားတစ်ယောက်ပါ…….။“ကိုယ်ရဲ့နေရာ… ကိုယ်ရဲ့တာဝန်… ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်..ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကိုယ့်ရဲ့သမိုင်းကိုမိမိကိုယ်သာလျင်မိမိအသိဆုံးမို့…လိပ်ပြာလုံရဲ့လားဆိုတော့…..အရမ်းလိပ်ပြာလုံတာပေါ့…..လူပီသတဲ့ လုပ်သင့်လုပ်အပ်တဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုအဓိကနဲ့သာမညခွဲခြားသိမြင်ပီးလုပ်နိင်သမျှလုပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာထိထိမိမိလုပ်ခဲ့ပီးပြီလေ..ဒီလိုအချန်ဒီလိုကာလမှာ(အဖြု)(အမဲ )(မိတ်ဆွေ )(ရန်သူ)ကွဲပြားတဲ့ကာလ မို့အားလုံ းရင်ထဲမှာအရာအားလုံးမှတ်ထားပါတယ်….
.သေချာတာတစ်ခုကတော့ကျန်တော့်ရဲ့designer လုပ်သက်(၁၄နစ်)အတွင်းမှာယနေ့အချိန်ထိမည်သူတစ်ဦးတယောက်ရဲ့ဩဇာအာဏာလွှမ်းမိုးမှူကိုမခံပဲကျန်တော့်ရဲ့ရွေးချယ်မှူဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သာယနေ့အချိန်ထိရပ်တည်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်တော်အမြဲလိပ်ပြာလုံနေပါတယ်….Fb သုံးခဲ့တဲ့ကာလတလျောက်လုံးလည်းသူများကိုတိုက်ခိုက်ပုတ်ခတ်ပြီးဆဲဆိုစောင်းမြောင်းပြောဆိုချင်းတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတာFb ကသူငယ်ချင်းတွေသိမှပါ…အခုလိုအချိန်မှာလူတွေအားလုံးအလုပ်အကိုင်တွေအဆင်မပြေစီးပွါးရေးတွေအဆင်မပြေဖြစ်နေချိန်မှာဒီလိုအကြောင်းတွေလည်းမရေးချင်ပါဘူး…ချစ်ခင်ရတဲ့မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေ..ကျန်တော့်အမေတို့ကလည်းပြန်မရေးဖို့ပြောကြပေမဲ့တချို့မသိသေးတဲ့သူတွေတမျိုးထင်မှာစ်ုးလို့ရေးလိုက်မိတာပါ….သေချာတာတစ်ခုကတော့…ကျန်တော်လည်းပြည်သူထဲကသမာအာဇီဝကျကျလုပ်ကိုင်ရှာဖွေစားသောက်နေရတဲ့ပြည်သူတစ်ယောက်ပေမို့ပြည်သူနဲ့တစ်သွေးထဲတစ်သားထဲရှိနေခဲ့တာရက်ပေါင်း(၁၀၀)ကျော်နေပါပြီဆို တာလေးပြောပါရစေ………”ဆိုပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေဖော်ပြပေးလိုက် ပါတယ်။
ရန္ကုန္အဝင္ဂိတ္မွာစစ္တဲ့အခ်ိန္က်မွ ကားထဲကေမ့ျပီး ျပန္မထုတ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဓား(၃)ေခ်ာင္းမိသြားခဲ့တဲ့ သူ႔ရဲ႕အျဖစ္အပ်က္ကိုေျပာျပလာတဲ့ ထူးအယ္လင္း
တစ္ေခတ္တစ္ခါက ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ဒစၥကိုဘုရင္မ ေတးသံရွင္ ေနာ္လီဇာ ကြယ္လြန္